Dal daloolada Jubbaland ee ay Puntland ka faa’ideysan karto berri si ay ugu guuleysato tartanka M/Gobolleedyada sanadkii labaad oo is xiga…… – Gool FM
Dal daloolada Jubbaland ee ay Puntland ka faa’ideysan karto berri si ay ugu guuleysato tartanka M/Gobolleedyada sanadkii labaad oo is xiga……
Kaafi December 21, 2017
(Muqdisho) 21 Dis 2017. Berri waxaa la soo gabagabeyn doonaa tartanka M/Gobolleedyada oo sanadkii labaad oo xiriira ka dhacaya caasimadda Soomaaliya, Muqdisho.
Waxaa kama dambeystiisa ku hardami doona markale Jubbaland iyo Puntland – sanadkii hore waxaa gool ku laadyo ku qaaday Puntland.
Hadaba, berri yaa gacanta sare yeelan doona? Waqtiga ayaa sheegi doona balse waxaan hoos ku sharraxi doonnaa meelaha ay ka jilicsan tahay Jubbaland oo u sahli doona haddii ay ka faa’ideystan dhiggooda in ay taariikh ka sameeyaan Koonis.
Kulamadii ay dheeshay Jubbaland ilaa iyo hadda iyo wixii laga bartay
Benadir Vs. Jubbaland (2-1).
Kulankan waxa uu ahaa kii lagu daah furay ololahan waxa uuna ahaa mid ay isku fara saareen laba koox oo afar dhammaadkii kal hore isku arkay – Jubbaland ayaa gool ku laadyo ku badisay.
Ciyaarta qeybtiii hore waxa ay ku dhammaatay 0-0 oo inta badan wey isu dheeli tirneyd balse daafacyadda Jubbaland waxaa ka muuqday khal khal, kalsooni darro iyo in labadooda dambeed (Dadabyada middig iyo biddix) ay sameenayeen bixitaan sababayey in halis la galiyo goolkooda mar walba.
Markii qeybtii dambe la’isugu soo laabtay Benadir waxa ay dhalisay laba gool iyada oo ka faa’ideystay kalsooni darradda daafacyada J/Land.
Sidoo kale waxaa muuqatay in tabababaraha J/Land loogu awood sheegtay qolka lebiska oo uusan dersin ciyaarta sidii ay u dhacday qeybtii hore halka dhiggiisa Benadir uu ka soo faa’ideystay nasashadii.
Waxa ay heleen gool uu iska dhaliyey boortaha Benadir markii dambe mana ahayn weerarkooda mid ku salleysan kaarto balse jawaab bixin gool uun raadi ah.
Jubbaland Vs. Galmudug (2-1)
Kulankii labaad waxa ay la ciyaartay Galmudug oo ahayd kooxda ugu jilicsaneyd tartanka.
Waxaa la filayey in ay si fudud ku marto taas oo u suurtagashay – waxa ay uga badiyeen 2-1.
Hase ahaatee, ciyaarta waxa ay si WEYN u caddeysay in Jubbaland ku tiirsan tahay DABAMARYO (Counter-Attack) iyada oo dhexdeeda aad u furan tahay daafacyadana gaar ahaan sida kulankii horeba dhacday dambeedyadeeda aad u liiteen.
Waxa ay u baahanayeen in ay caawiyaan daafacyada dhexe oo laftooda mid ka mida uusan xiriir wanaagsan kala dhaxeyn Maxamed Deeq oo ah ilaa iyo hadda daafaca ay ku tiirsan yihiin.
Ogow – Maxamed Deeq kal hore waxa uu ka dheelayey dhexda taas oo muujineysa in sanadkan aysan daafacyo wadan Jubbaland.
Galmudug kulankaas waxa uu ahaa kii ay ugu fiicneyd iyada oo marar badan beegsatay goolka Jubbaland ugu dambeynna ka dhaliyey darbo xor ah.
Jubbaland Vs. Koonfur Galbeed (2-1)
Ciyaartan waxa ay ahayd mid 50%-50% ah ma jirin mid ku cad cad maadama la ogaa HABACSANAANTA Jubbaland iyo horumarka ay sanadkan sameysay G/Galbeed – Ku darso waxaa jiray fallanqeeyeyaal ku doodayey in ay G/Galbeed soo bixi doonto iyaga ku salleenayey walaaca ay ka qabeen Jubbaland.
Hase ahaatee, Jubbaland waxa ay heshay gool xilli hore ah kaas oo neerfeyaashooda dejiyey halka uu cadaadis galiyey K/Galbeed oo u muuqatay mid KALSOONIDU ku badneyd.
Hase ahaatee, G/Galbeed waxa ay ku heshay fursado badan iyada oo BIRTA xittaa ugu dhufatay Jubbaland. Waxaa dheer in dhawr jeer laga soo xarooday garbaha J/Land taas oo wali sii caddeysay sida ay uga jilicsan tahay boosaskaas.
Waxyaabihii ugu weynaa in la arkayey kulankaas waxaa ka mid ahaa labada daafac ee garbaha uga dheela J/Land oo weerarka ku soo biiraya iyada oo aysan MUHIIM ahayn laba goolna leh taas oo fursado halis ah ku keeneysay kooxdooda.
Haddii ay dhici lahayd in khaladaadka iyo soo bixitaanka aan MUHIIMKA ahayn ee daafayada J/Lanad sameenayeen ay ka faa’ideysan lahaayeen kulankaas laba ama saddex gool ayey la imaan lahayd K/Galbeed.
MAXAA LAGA BARTAY HAB DHISMEEDKA KOOXDA JUBBALAND GUUD AHAAN?
-DHEX MA JIRTO
Jubbaland ciyaarteeda kumaba saleysna dhexda .
Daafacyo soo baxa iyaga oo aan ka fekerin halista DABAMARYO uga imaan karta.
-HAL DAAFAC DHEXE OO KALIYA….
Laba daafac dhexe ee Jubbaland waxaa la isku halayn karaa Maxamed Deeq oo u qaata ‘4’ kaas oo inta badan daboola isku dhexyaaca ku yimada saddexda la taagan gaar ahaan kuwa garbaha.
-BEDELKOODA CIYAARTA MA SAAMEEYAAN
Dhammaan kulamada ay ciyaartay J/Land waxa ay sameysay dhawr bedel, ma dhicin saameyn weyn oo ay ku yeeshaan ciyaarta – taas waxa ay muujineysaa in wali safkoodu ama kooxdooda kowaad fadhin.
YAA UGU HALIS BADAN?
Cabdiqaadir Jaamac Sanka (11) Waaa laacibka ug halista badan
Hayeeshee, inta badan Kubbadihiisa natiijo ma dhaliyeen oo waxa uu ku mashquulaa cag wareejin iyo in uu bixiyo baasas ciribyo iyo qurux badan kuwaas oo waqtiga ka lumiya kooxda. Haddii uu helo daafac fahma qaab ciyaareedkiisa, ka buundeeya kubadda aadna u dheeraaya gabi’ahaabna wuu aamusiin karaa.
Cilladda kale oo uu qabo ayaa ah in uu badanaa booskiisa ka maqan yahay oo uu dhexda soo aado si uu Kubadda u soo raadsado halkaas oo aysanba ku badneyn ciyaarta J/Land – waxaa u dheer ma caawiyo dadabka booskiisa saran.
Axmed Qaldaan (7) .
Waxaa ka muuqda is bedel badan sanadkan, kal hore waxa uu ahaa mid ka mida ciyaaryahanada ugu saameynta badan Jubbaland, awooddiisa ugu badan waa XAWAARE iyo in uu sugo Kubaddaha ku soo luma 18-ka afkiisa hore.
Fu’aad Maxamed Yusuf (10).
Waa xiddig aad u raacasho badan aadna u dheereeya balse malaha KUBADDA UGU DAMBEYSA – Yacni ma bixiyo baasas gaara weeraryahanka inta badanna waxa ay noqdaan kuwo qaldama.
Shaqadiisa ugu badan waa dhexda taas oo yareysa in ‘9’ koodu helo quudin ‘Supply’.
Muuse C/Raxiin (9).
Waa gool dhaliyaha ugu sarreeya haatan waxa uu dhaliyey saddex….
Taas waxa ay ka dhiggan tahay in uu yahay weeraryahanaka ilaa iyo haatan ugu wanaagsan koobka.
Yeelkeede, marka laga yimaado in uu xoog badan yahay, dheereeyo, yahay dhaliye la hubo hadana waxa uu daciif ka yahay dhinaca boos qaadashada, caawinta dhexda oo ay ka liidato kooxdiisa iyo in uu qaldo Kubbadaha uu cagta ku hayo badnaa.
Haddii uu ka horyimaado daafac xoog leh, dheereeya waxa ay u badan tahay in ay ciyaarta ka lunto.
Tababaraha Puntland maxaa laga gudboon hadaba?
-In uu ka faa’ideysto habacsanaanta daafac ee J/Land gaar ahaan labada garab
-In uu helo weeraryahan dheereeya oo ka mashquuliya daafacyada khal khalna galiya
-In ay IL GAAR AH oo feejignaan ku jirto ku hayaan C/Qaadir Jaamac Sanka iyo Muse C/raxiin
-in ay ka caburiyaan dhexda oo ah meel ay aad uga awood badan yihiin kooxdiisa
FA oo Go'aan ka soo saaray Dagaalkii dhex maray Man United iyo Manchester City??
"Kala saar Ganacsiga iyo Saaxiibtinimada.". Bergkamp oo waji gabax kala kulmay Saaxiibkii hore!!